नयाँ भाइरस दुःस्वप्न? WTN ले विश्वव्यापी खोप जनादेश र वितरणमा समानताको लागि आह्वान गर्दछ
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » Wtn » नयाँ भाइरस दुःस्वप्न? WTN ले विश्वव्यापी खोप जनादेश र वितरणमा समानताको लागि आह्वान गर्दछ
अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • स्वास्थ्य समाचार • मानव अधिकार • समाचार • मान्छे • पर्यटन • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • Wtn
कोरोनाभाइरसको ओमिक्रोन स्ट्रेन पत्ता लागेपछि दक्षिण अफ्रिका स्तब्ध र क्रोधको अवस्थामा छ।
रातारात, सुरुङको अन्त्यमा उज्यालो उज्यालोको पर्खाइमा रहेको यात्रा र पर्यटन उद्योग, सीमाना बन्द हुने, उडानहरू रद्द हुने, र सार्वजनिक स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्ने अज्ञात भाइरस तनावको साथ अँध्यारो युगमा फर्कियो।
आज, विश्वले अर्को जनस्वास्थ्य संकटको सामना गरिरहेको छ जुन अझै थोरै ज्ञात तर सम्भावित रूपमा अत्यधिक संक्रामक र अधिक खतरनाक ओमिक्रोन स्ट्रेन कोरोनाभाइरसको पत्ता लागेको छ। यो तनाव दक्षिण अफ्रिकामा उत्पन्न भएको हो, र हङकङ र बेल्जियममा पनि पृथक अवस्थामा पत्ता लागेको छ।
दक्षिण अफ्रिकामा 23.8% जनसंख्या पूर्ण रूपमा खोप लगाइएको छ, र अफ्रिकाका धेरै भागहरूमा, यो संख्या एकल अंकमा मात्र छ, पर्याप्त खोप उपलब्ध छैन।
पर्यटनलाई पहिले भन्दा बढि विश्व एकता चाहिन्छ जसमा राष्ट्रहरूले आफ्ना सँगी राष्ट्रहरूलाई मद्दत गर्छन्।
डा. पीटर टार्लो, अध्यक्ष WTN
WTN का अध्यक्ष डा. पिटर टार्लोले विश्वलाई सम्झाउनुहुन्छ कि सबै राष्ट्रहरूले यो सानो ग्रह साझा गर्छन् र हामीले यस ग्रहमा जताततै COVID-19 लाई हटाउन एकसाथ काम गर्नुपर्छ।
कोभिड विरुद्ध लड्नु कुनै एक देशको मात्र काम होइन, तर स्वास्थ्य र शान्त विश्वको लागि मिलेर काम गर्ने सबै देश र क्षेत्रहरूको काम हो।
Juergen Steinmetz, अध्यक्ष WTN
WTN अध्यक्ष जुर्गेन स्टेनमेट्जले थपे: “सबै देशहरूमा खोपहरूको समान वितरण महत्त्वपूर्ण छ। हामी विश्वलाई सम्झाउने गरौं: सबैजना खोप नभएसम्म कोही पनि सुरक्षित छैन!
यो सुरुदेखि नै थाहा थियो जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो सपथ ग्रहण लगत्तै भनेका थिए, जबसम्म सबै सुरक्षित हुँदैनन् तबसम्म कोही पनि सुरक्षित हुँदैनन्।
वैज्ञानिक नियमहरू पालना नगर्दा, ओमिक्रोन स्ट्रेन जस्ता भाइरसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका भेरियन्टहरू सजिलै विकसित हुन सक्छन्। त्यस्ता भिन्नताहरूले एक दिन हाम्रो हालको खोप सुरक्षालाई बेवास्ता गर्न सक्छ, जसले संसारलाई सबैतिर सुरु गर्न बाध्य पार्छ।
यो एक जोखिम हो जुन मानवताले टिकाउन सक्दैन र छैन।
विशेष गरी, खोप उपलब्ध नभएका देशहरूमा, यस्तो दुःस्वप्न परिदृश्य ट्रिगर गर्ने खतरा उच्च छ।
दक्षिण अफ्रिकाको उदीयमान अवस्थाले अब 8 देशहरूलाई रातारात अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा र पर्यटनबाट अलग पारेको छ र अर्थतन्त्रमा अवरोध पुर्‍याइरहेको छ। यो हामी सबैको लागि जागरण कल हुनुपर्छ।
केवल देशहरू बीचको सिमाना बन्द गर्नु एक धेरै छोटो अवधिको समाधान मात्र हो। यो संसार एक अर्कासँग जोडिएको छ, र भाइरसले सीमानाको सम्मान गर्दैन। यस समयमा मानवतालाई थाहा भएको कुञ्जी खोप हो।
यसमा आर्थिक लाभ वा प्रतिबन्ध, राजनीतिक स्थिति र अन्य सांसारिक कारणहरूबाट स्वतन्त्र, सबै ठाउँमा व्यापक र आशापूर्वक पूर्ण वितरण समावेश छ।
यो विश्व पर्यटन नेटवर्क सबै ठाउँमा प्रभावकारी भ्याक्सिनको व्यापक र पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित गर्न प्याटेन्ट नियमहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूलाई एकपटक थप खुकुलो बनाउन आह्वान गर्दछ।
Cuthbert Ncube, अध्यक्ष अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड
विश्व पर्यटन नेटवर्क, को एक प्रमुख साझेदार को रूप मा अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड (ATB), दक्षिणी अफ्रिकाका मानिसहरू र विशेष गरी साथीहरू र यात्रा र पर्यटन उद्योगका सदस्यहरूका लागि महसुस गर्दछ।
एटीबीका अध्यक्ष कुथबर्ट एनक्यूबले समान खोप वितरण र यसलाई सहज बनाउन प्याटेन्ट आवश्यकताहरूमा छुट दिने मुद्दाहरूमा स्पष्ट रूपमा बोलेका छन्।
यो अवस्थाले पर्यटन भन्दा बाहिर गम्भीर नेतृत्व लिन्छ, र हामी सबैले खोप उपलब्धताको यो मानव लक्ष्यलाई सुनिश्चित गर्ने कुनै पनि पहललाई धक्का र समर्थन गर्न आवश्यक छ।
UNWTO, WHO, सरकारहरूमा र प्रमुख उद्योगहरूमा प्रभावकारी गैर-स्वार्थी नेतृत्व आजको भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
यदि विज्ञान र स्वास्थ्य अधिकारीहरू र सुरक्षित रूपमा खोप प्राप्त गर्न सक्षम छन् भने WTN ले खोप आदेशलाई समर्थन गर्दछ।
विश्व पर्यटन नेटवर्क र सदस्यता बारे थप: www.wtn.travel